Madaxwayne Cabdi Maxamuud: TVET-ku Waa Dhiig Joojinta Dhibaatooyinka Saboolnimo. - Cakaara News
Madaxwayne Cabdi Maxamuud: TVET-ku Waa Dhiig Joojinta Dhibaatooyinka Saboolnimo.
Jigjiga(CN) Talaado.June.16.2015, shirwaynihii caadiga ahaa ee wadatashiga shacabka iyo xukkuumada DDSI oo galabta maalinkiisii 3aad maraya ayaa maanta labadii galinba sii guda galay arimaha nabadgaliyada, horumarka iyo maamulka suuban.
Hadaba madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa galabta guriga si cilmiyaysan oo xeel dheer ugu soo bandhigay sidii loo cidhibtiri lahaa saboonimda iyo tubaha horumarka lagu sii xoojinayo.
Madaxwwayne Cabdi Maxamuud Cumar oo ugu horayntii uga mahadceliyay dhamaan ciddi kagaysatay isbadalka maanta lagaadhay oo ay ugu horeeyaan shacabka, dawlada federaalka, ciidamada Liyuu booliska ayaa sheegay in iskaashi lagu gaadhay heerkan maanta.
Wuxuuna madaxwaynuhu sheegay in cadawga koobaad ee saboonimada laga qalin jabin doono hadii lasii xoojiyo kaqayb qaadashada iyo iskaashiga qorshayaasha horumarineed ee dalka iyo deegaankaba kuwaas oo aan kabaranay qorshihii shanta sano ee lasoo dhaafay kaasoo dalkeena u horseeday hiigsiga wadamada uu dhaqaalahoodu dhex dhexaadka yahay.
Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar oo galabta si durugsan guriga ooga hadlay nabadgaliyada iyo horumarka ayaa mar uu kahadlayay qorshayaasha horumarineed ee xukuumada waxaa uu ku nuux nuuxsaday sida tabaha looga bixi karo saboonimda laguna gaadhi karo horumar waara.
''Iyadoo ay jiraan qorshayaal badan oo ay xukuumadu u dajisay ladagaalanka saboonimda iyo hirgalinta horumar waara ayaa waxaan tusaale yar u soo qaadan karaa yoolka balaadhinta xirfadaha iyo farsamada (TVET) oo ah dhiig joojinta Saboonimda..." ayuu yidhi madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar.
Madaxwaynaha ayaa galabta guriga kasoo jeediyay hadalo aad dhiiri galin u ah oo taabanayay horumarka iyo maamulka suuban. Wuxuuna sheegay in aan boqolkiiba boqol shantii sano ee lasoo dhaafay horumar lagaadhin oo ay meel shaqo taalo dhaliil ka iman karto balse inta badan laqabtay shaqooyin badan oo dhiiri galin iyo sii xoojin ba mudan.
Sidoo kale waxaa uu madaxwaynuhu kahadlay barnaamijyada horumarinta bulshada sida dhiiro galinta iyo xoojinta dumarka oo ah laf dhabarta bulshada. Wuxuuna sheegay in dhamaan degmooyinka laga hirgalin doono nidaamka amaahda iyo abuurista shirkado si gaar ah u kabi doono haweenka iyo dhalinyarada. Dhinaca kale waxuu madaxwaynuhu kawaramay barnaamijyada kale ee horumarinta sida wakaalada horumarinta guriyaynta oo dhinaca horumarka wax badan kabadali doonta.
Sida uu madaxwaynuhu sheegay maadaama uu Ramadaankii soo galay waxaa lafilayaa in caawa lasoo gabagabeeyo shirwaynaha. Madaxwaynaha ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay ahmiyada shirwaynaha wada tashiga uu deegaanka iyo hotumarkiisa u leeyahay isagoo sheegay in ay walib muhiim tahay in laga dhigo lix biloodle ama sanadkiiba laba jeer.
Guurtida odayaasha iyo dhamaanba guriga ayaa aad u soo dhaweeyay qorshayaasha iyo hanaanka xukuumada ee uu madaxwaynuhu galabta soo jeediyay iyagoo ka makhraati kacay talaabada cad ee laqabtay kuna tilmaamay hanaan daacadnimo oo ka go'anaansho leh.
Kala soco CakaaraNews Gababa Gabada Shirwaynihii Wadatashiga shacabka iyo xukuumada DDSI ee kasocday madasha shirarka ee Sayyid Maxamed Cabdille Xasan ee caasimada magaalada Jigjiga.